Horudhac: Barcelona vs Eibar… (Lionel Messi oo ka maqnaan doona Blaugrana kulanka caawa ka dhacaya Camp Nou) – Gool FM
Horudhac: Barcelona vs Eibar… (Lionel Messi oo ka maqnaan doona Blaugrana kulanka caawa ka dhacaya Camp Nou)
Haaruun December 29, 2020
(Barcelona) 29 Dis 2020. Barcelona ayaa isha ku haysa inay sii wadato qaab ciyaareedkeedii xoogganaa ee ay dhawaanahan ku jirtay horyaalka La Liga markii ay garoonkeeda Camp Nou ku soo dhaweynayaan caawa kooxda Eibar.
Kooxda reer Catalans ayaa badisay saddex ka mid ah afartii kulan ee ugu danbeeyay ee horyaalka, iyagoo u dhaqaaqay kaalinta shanaad ee kala sarreynta horyaalka, halka Eibar ay haatan ku jirto kaalinta 17-aad, iyadoo 15 dhibcood ka heshay 15 kulan oo ay ciyaareen horyaalka xilli ciyaareedkan.
Taariikhda: Talaado 29 Dis 2020
Saacadda ay bilaabaneyso dheesha: 9:15 Habeennimo xilliga geeska Afrika.
Garsooraha: Javier Alberola (Spain)
Jordi Alba ayaa ka ganaaxan kooxda garoonkeeda lagu ciyaarayo caawa, taasoo la minco ah inuu daafaca garabka bidix ka ciyaari doono Junior Firpo.
Lionel Messi ayaa la siiyay fasax dheeri ah kaddib markii uu ku soo laabtay Argentina oo uu u dabaaldegayay ciidda masiixiga, halkaana kuma soo muuqan doono.
Philippe Coutinho waa inuu ka soo muuqdaa garabka bidix kooxda martida loo yahay, halka Pedri uu sii wado ka ciyaarista booska khadka dhexe si qoto dheer.
Eibar ayaa la filayaa inay ciyaarto kaliya hal weeraryahan oo afka hore ah, mana ahan Yoshinori Muto iyo Sergi Enrich oo labaduba dhaawacyo qaba.
Pedro Leon waa inuu ku soo bilowdaa dhanka midig ee kooxda martida ah kaddib goolkii uu ka dhaliyay Alaves kulankii ugu dambeeyay.
Esteban Burgos waa in laga doorbido Paulo Oliveira oo daafaca dhexe kaga ciyaara Eibar, sababo la xiriira taam ahaanshihiisa.
>- Kooxda martida loo yahay wax guuldarro ah ma soo gaarin dhammaan 12-kii kulan ee ugu dambeeyay.
>- Kaliya mid ka mid ah 12-kii kulan ee ay ciyaareen labadan kooxood ayaa barbaro ku dhammaaday sanadkii 2019-kii.
>- Labada koox ayaa gool dhaliyay kaliya hal kulan shantoodii kulan ee ugu dambeeyay.
>- Kulankoodii hore wuxuu ku dhammaaday 5-0 ay ku badiyeen Kooxda Catalans.
>- Kooxda martida ah ayaa dhalisay kaliya 6 gool guud ahaan 12 isku day.
>- Barcelona ayaan la garaacin 36 kulan oo ka mid ah 38-deedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay garoonkeeda ku ciyaartay horyaalka La Liga.
>- Kooxda Barcelona ayaa dhalisay ugu yaraan labo gool 12-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay wajahday naadiga Eibar tartammada oo dhan.
>- Barca ayaa guuleysatay 11 ka mid ah 12-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay la ciyaartay Eibar dhammaan tartammada kala duwan.
>- Kooxda Barcelona ayaa guuleystay qeybta hore iyo ciyaarta oo dhammaystiran shank a mid ah lixdeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay wajahday Eibar tartammada oo dhan.
Horudhac: Brighton & Hove Albion vs Arsenal... (Brighton oo rikoor 40 jir ku dhow ka haysata Gunners)
Horudhac: Manchester United vs Wolverhampton Wanderers... (Wolves & Man Utd oo labaduba doonaya inay ku soo laabtaan wadada guusha ee Premier League)